Sidee baalayaasha qoraxda u shaqeeyaan: noocyada iyo taxonomy | Cusbooneysiinta Cagaaran
Sidee bay u shaqeeyaan cadceedda
Waxaan ognahay in tamarta la cusboonaysiin karo gudahood, tamarta qoraxda ay tahay tan ugu badan ee bixinaysa. Marka laga hadlayo tasiilaadka yar-yar ee is-adeegsiga, Isbaanishku si tartiib tartiib ah ayuu usii kordhayaa. Guryo aad u tiro badan ayaa doortay in la rakibo qalabka wax lagu sawiro maaddaama ay u taagan yihiin badbaadinta wanaagsan ee biilka korontada waxaanan heli karnaa mas'uuliyadda deegaanka ee waqtiyadu dalbanayaan. Si kastaba ha noqotee, dad badani ma oga sida baalayaasha cadceedu u shaqeeyaan.
Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeyneynaa si aan kuugu sheegno sida ay u shaqeeyaan baalayaasha ku shaqeeya cadceedda iyo wax kasta oo iyaga la xiriira.
1 Sidee baallayaasha qoraxda ee sawir-qaadaha u shaqeeya
2 Awooda qoraxda
3 Sidee bay u shaqaysaa baalayaasha qorraxda: taxonomy
4 Faa'iidooyinka taarikada monocrystalline
Sidee baallayaasha qoraxda ee sawir-qaadaha u shaqeeya
Sida magaceeda ka muuqata, tamarta qoraxda waxay ka faa’iideysataa tamarta qorraxda si ay u dhaliso tamar koronto. Faa'iidooyinka aan u leenahay tamarta qorraxda waxaan ka helnay in aysan wasakheynin deegaanka, waa mid aan xad lahayn, in kasta oo sidoo kale ay jiraan qasaarooyin gaar ah sida sii waditaankiisa Abuuritaanka sawir-qaadaha ayaa si sax ah u ah hantida ay alaabooyinka qaarkood u leeyihiin inay awoodaan waxay soo saartaa qulqulka korantada markii ay ku dhacdo shucaaca qoraxda. Tani waxay dhacdaa marka tamarta ku jirta iftiinka qoraxda ay sii deyso elektaroonno abuureysa qulqulka tamarta korantada. Waa inaan ogaano in shucaaca qoraxda uu yahay qulqulka sawir qaadayaasha.
Si loo ogaado sida ay u shaqeeyaan baalayaasha qorraxda waa inaan ogaanno waxa ka kooban qayb ka mid ah unugyo taxane ah oo sawir qaade ah. Iyagu waa wax aan ka badnayn lakabyada silikoon ee lagu buuxiyo fosfooraska iyo boron. Waad ku mahadsan tahay shucaaca qoraxda ee dhaliya koronto, waxay la mid tahay iyaga oo ku taxaluqa qayb ka mid ah qaybaha danabku waxaa lagu hagaajin karaa nidaamka DC ee la isticmaali karo. Iyada oo loo marayo qalabka wax lagu beddelo hadda waa meesha tamarta joogtada ah ee ka dhalata qaybta qorraxda loo beddelayo tamar kale oo loo isticmaali doono guriga.
Tamarta adigoo ku xiraya qalabka wax soo beddela waa meesha ay ka sameysmayaan tamar beddel ah. Xusuusnow inaad beddeshaan tamarta la cuno maalinba maalinta ka dambaysa. Danab ee ay bixiyaan unugyada qoraxda had iyo jeer waa cadaalad joogto ah oo qumman. Si kastaba ha noqotee, xaddiga korantada hadda la bixiyo waxay ku xirnaan doontaa xoogga shucaaca qorraxda ee uu ku dhacayo qalabka korontada ku shaqeeya. Sidaa darteed, waxqabadka qalabka korontada ku shaqeeya ee ku shaqeeya cadceedda wuxuu inta badan kuxiran yahay sida ay ufiicantahay iftiinka uu helo. Dawlado saldhig oo kala duwan hadba waqtiga maalinta, waqtiga sanadka iyo cimilada hadda jirta.
Si loo fahmo sida ay u shaqeeyaan soolladaha qorraxda, waa inaan si fiican u ogaanno sida loo xisaabiyo awoodda moduleka qorraxda. Waana marka la cabirayo awoodda, waxqabadka darfaha waa in sidoo kale la xisaabiyaa. Qiyaasta loo adeegsaday modules qoraxda waxaa lagu sameeyaa watts peak (Wp). Waa cabbiraad loo adeegsado tixraac waana mida u adeegta in lagu cabiro waxqabadka barxadaha si ay u awoodaan inay yagleelaan, hadhow, isbarbardhiga u dhexeeya.
Waa in la fahmo in qadarka shucaaca qoraxda ee saameynaya qeybta qorraxda uu ku kala duwan yahay waqtiga maalinta iyo waqtiga sanadka. Xilliga la soo saaray waa in lagu xisaabiyaa iyadoo la adeegsanayo oscillation aad u tiro badan tanina waxay adkeyneysaa in la xisaabiyo. Mar walba ma dooneyno inaanu soo saarno isla qaddarka tamarta ah, sidaa darteed waxaan sameyn karnaa qiyaas ka badan ama ka yar. Si loo xaliyo dhibaatadan, watts peak ayaa la isticmaalaa. Waxay matalayaan waxqabadka ay soo bandhigeen xubnayaasha la siiyay shucaaca qoraxda iyo heerkulka caadiga ah. Tani waxay muhiim ka dhigeysaa marka la qiyaasayo rakibidda sawir-qaadista si loo falanqeeyo inta watts ee ugu sarreysa Waa in lagu rakibaa si ay u helaan awoodda is-isticmaalka ugu badan ee suurtogalka ah. Markii la rakibayo qalabka korontada ku shaqeeya ee qoraxda ku shaqeeya, waa in dhammaan arrimaha la tixgeliyaa, sida aagga juquraafi ahaan, jihaynta saqafka iyo xagalkiisa. Sidan oo kale, dhammaan xogtan waa in la geliyaa si loo falanqeeyo isticmaalka iyo rajooyinka isla markaana loo qiyaaso cabbirka rakibaadda ku habboon baahiyaha mid kasta.
Sidee bay u shaqaysaa baalayaasha qorraxda: taxonomy
In kasta oo baalayaasha cadceedda wax badan iska beddeleen tan iyo markii ay wax soo saarkoodii ugu horreeyey sameeyeen, haddana maanta waxaa lagu soo saaray qalab aad u horumarsan oo ka dhigaya kuwo aad u tayo badan. Tan awgeed, waxaan ku dhufan karnaa waxqabadkaaga si intaas la eg tamarta qorraxda waxaa loo taagay tamar kale, dib loo cusboonaysiin karo oo gebi ahaanba faa'iido u leh muddada dhow iyo tan fogama. Nidaamka ka dhaca gudaha unugyada qoraxda wali waa saameyn uu ku tilmaamay Einstein sanadkii 1905.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo isbarbar dhigo barxadaha ku saleysan silsiladda waxaana badanaa loo qaybin karaa dhowr qaybood: amorphous, polycrystalline iyo monocrystalline. Waxaan falanqeyn doonnaa waa maxay astaamaha nooc kasta oo ka mid ah noocyada qoraxda:
Xaraashyo amorphous ah: way sii yaraanayaan wayna sii yaraanayaan sababtoo ah ma lahan qaab dhismeed qeexan oo lumiya waxtarka ku filan inta lagu jiro bilaha ugu horreeya ee hawlgalka.
Qalabka polycrystalline: Waxay ka kooban yihiin kristantarro jihooyin kala duwan leh waxaana lagu kala saaraa iyagoo leh midab buluug ah. Habka wax soo saarku wuxuu leeyahay faa iidada inuu noqdo mid ka raqiisan laakiin leh faa'iido daro inuu noqdo wax soo saar yar.
Guddiyada Monocrystalline: waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin wax soo saarka ugu tayada sareeya. Halkan unugyadu waxay sameysmayaan guddiga waxayna ka kooban yihiin hal kristal oo ah silsilad daahir ah oo sare oo lagu adkeeyay heerkul isku mid ah. Thanks to dhismahan, waxay leeyihiin waxqabad sare iyo waxtar waxayna u oggolaanayaan elektaroonigyada inay si xor ah u socdaan. In kasta oo habka wax soosaarku qaali yahay, haddana wuxuu ku siinayaa qaybtani waxqabad badan.
Faa'iidooyinka taarikada monocrystalline
Iyagu waa kuwa loogu taliyo maadaama tan hore ay duugoobeen. Faa'iidada kaliya ee polycrystallines ay soo bandhigto waa qiimo yar. Monocrystallines waxay leeyihiin faa'iido inay leeyihiin waxtarka sare iyo shaqada ka fiican ee jawiyada leh soo-gaadhista iftiinka qoraxda oo yar. Taas macnaheedu waxa weeye in waxtarka aan lumin xitaa haddii xaaladaha deegaanku aysan fiicnayn.
Wuxuu rajeynayaa in macluumaadkan ay wax badan ka ogaan karaan sida baalayaasha qoraxda u shaqeeyaan iyo wax kasta oo ay fuliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Sidee bay u shaqeeyaan cadceedda
Waa maxay dhibic nadiif ah
Xayawaankii dabar go'ay